Soo dejisan TuneFab Apple Music Converter 6.6.3 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaTuneFab Apple Music Converter
Bogga rasmiga ah: TuneFab Apple Music Converter
TuneFab Apple Music Converter – waa qalab lagu soo dejiyo waxyaabo ku saabsan barnaamijyo fara badan oo kala duwan oo iTunes ah oo aan lahayn DRM. Software-ka wuxuu awood u leeyahay inuu furo furaha DRM ee Apple u adeegsado inuu xaddido helitaanka waxa ku jira ka dibna uu u beddelo muusikada la ilaaliyo qaabab kale oo maqal ah oo ay kala soo baxdo si ay si xor ah uga dhagaysan karto aaladaha kale. TuneFab Apple Music Converter wuxuu u beddeli karaa qaabab waddo-wadayaal iyo liiska oo dhan oo leh Music Music oo ay kujirto M4P la ilaaliyo, laga soosaariyo heesaha maqalka fiidiyowga, loona beddelo buugaagta maqalka ee iTunes ama Dhageysiga qaabab kala duwan. Software wuxuu taageeraa qaabab sida MP3, M4A, AC3, AAC, AIFF, FLAC, iyo kuwa kale. TuneFab Apple Music Converter wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isku hagaajiso goobaha codka ee beddelka oo aad keydiso calaamadaha faylka asalka ah ee la beddeli karo haddii la door bido. Sidoo kale, TuneFab Apple Music Converter wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si gaar ah u habbeysid xawaaraha beddelaadda faylasha iyadoo loo eegayo baahiyahaaga shaqsiyadeed.
Taageerida qaabab file kala duwan wax soo saar
Soo dejinta iyo beddelaadda muusikada iyo buugaagta maqalka
Qaabeynta dejinta codka ee faylalka wax soo saarka
Kaydinta calaamadaha asalka ah ee wax laga beddeli karo
Soo dejisan TuneFab Apple Music Converter
Isticmaalkani wuxuu u baahan yahay iTunes si habboon u shaqeeya
TuneFab Spotify Music Converter – waa barnaamij barnaamij looga saarayo ilaalinta DRM faylashaada muusiga ee ’Spotify’ kaas oo loo badali karo qaabab kale oo maqal ah lagana soo dejisan karo kumbuyuutar si loogu keydiyo deegaanka.
Faallo ku saabsan TuneFab Apple Music Converter
TuneFab Apple Music Converter Xirfadaha la xiriira
MAGIX Music Maker – software ah oo lagu abuurayo heesaha muusikada ee noocyada kala duwan. Softiweerku wuxuu leeyahay tiro ka mid ah saameynta istuudiyaha, aaladaha xirfadda leh, iyo tusaalooyin diyaar ah.
DivXLand Media Subtitler – softiweer waxaa loogu talagalay in la abuuro, wax lagu saxayo laguna daro qoraal hoosaadyo faylka fiidiyoowga ah. Codsiga wuxuu taageeraa qaabab hoosaadyo badan oo hoosaad ah wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad soo saarto cod maqal ah.
CDBurnerXP – waa barnaamij lagu gubo CD, DVD, HD-DVD iyo Blu-ray. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto faylasha ISO iyo diskiyada bootable-ka ah.
Crypto! – barnaamij softiweed oo lagu abuuro laguna xalliyo cryptographs-ka. Software-ka waxaa ku jira aalado badan oo lagu abuuro noocyo kala duwan oo loo yaqaan ’cryptography’.